“Muddo Laba Sanadood Ah Ayey Noqonaysaa Wakhtigii Aan Somaliland U Soo Wareegay, Ee Aan Sidda Tooska Ah Siyaasadda Ugu Dhex Jiray.”Jamaal Cali Xuseen | Salaan Media
“Muddo Laba Sanadood Ah Ayey Noqonaysaa Wakhtigii Aan Somaliland U Soo Wareegay, Ee Aan Sidda Tooska Ah Siyaasadda Ugu Dhex Jiray.”Jamaal Cali Xuseen
(SM:Hargaysa) Murashaxa Xisbiga UCID aqoonyahan Jamaal Cali Xusseen ayaa waraysi dheer oo uu siiyay Wargeyska Saxafi waxaa uu si qoto dheer u sharaxay dhacdooyinka uu kala kulmay mudada kooban ee uu ka dhex muuqday saaxadda Siyaasadda Somaliland.
Jamaal Cali Xuseen sanad ka hor maalmahan oo kale ayuu ka soo wareegay Xisbiggii UDUB oo khilaaf ka dhacay, islamarkaana uu u diggo rogtay Xisbiga UCID. Sidaas darteed, inta aanan su’aalo kale oo badan oo xaaladda maanta taagan iyo rajooyinka mustaqbalka u gallin, waxaanu ugu horeyn Jamaal weydiinay mudada uu siyaasadda Somaliland ku guddo jiray, waxyaabaha uu kala kulmay. waxaana uu ku bilaabay haddalkiisa oo uu yidhi. “Muddo laba sanadood ah ayay noqonaysaa waqtiga aan Somaliland u soo wareegay ee aan sidda tooska ah siyaasadda ugu dhex jiray. Mudadaas sagaal bilood oo ka mid ah UDUB ayaan arrimeheedii ku mashquulsanaa iyo wareerkii aan kala kulmay oo taas war kuguma seegana…waxaan jeclaa markaas hore in aan haggaajino xisbigii weynaa, laakiin, waakii khilaafku yimi ee ay aakhirkiina UDUB burburka ku danbeeyay nasiib darro. Anaguna markii aanu aragnay in aanay meela u socon UDUB ayaanu go’aansanay in aanu ka tagno ka hor intii aanay burburin. Waxaana taariikhdu wax ka su’aali doontaa raggii gacanta ku hayay xisbigaas oo aanay ahayn runtii inuu meesha ka baxo. Markii danbe, UCID ayaanu u diga-roganay,” Sidaas ayuu yidhi.
Waqtiyaddaas uu Jamaal ku biirayo Xisbiga UCID laftiisa waxaa ka baxay rag badan oo uu hormuud u yahay Guddoomiyaha Golaha Wakiiladda Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi (Ciro) ka dib khilaaf dhex maray Guddoomiyaha Xisbigaas Mudane Faysal Cali Waraabe. Laakiin, waxaa kaalintii kooxdaas hore buuxiyay garabka ka soo go’ay UDUB. Maadaama ay sidaas ahayd, waxaanu Jamaal weydiinay xaaladda Xisbiga UCID ku sugnaa markaas ee uu ugu tagay waxaana uu yidhi. “UCID laftiisu xisbi balaadhan ayuu ahaa laakiin waa run markaa aanu u tagnay UCID xaalad adag buu ku jiray. Qaab dhismeed ahaan, xafiisyo ahaan iyo xubno ahaanba.”
Jamaal waxaa uu intaas ku daray isaga oo ka jawaabaya su’aalaha la xidhiidha dad badan oo ka soo horjeedday inuu ku biro UCID xiligaasi oo uu yidhi. “Haa, Dalka dibadiisa iyo gudahabana waa la’igaga soo horjeedday oo waxa la’igu lahaa waxaad tagaysaa Markab sii dagaya. Qofka aadamaha ahina marka uu wax eego, waxbuu isu geegeeyaa oo xisaabsadaa. Tii Ilaahayna waa jirtaa. Dadkuna marka ay sidaas leeyihiin waxay ka fikirayaan oo eegayaan uun xisbiga xaaladiisa markaa iyo dadka jooga, laakiin, ma eegayaan waxaa aanu ku biirin karayno marka aanu u tagno koox ahaan intayadii UDUB ka wadda guurtay, markaa anigu markaan isu geeyay taageerayaashii UCID hore u joogay iyo wixii aanu ku soo biirin karaynay rajo fiican baan qabay. Taas ayaana keentay in aanu ku biirno.”
Xiliyadaas waxaa uu sheegay in doorashadii lagu soo kadiyay, islamarkaana ay soo gashay bishii Ramadaan. Iyaddoo la doonayo in ay keenaan boqolaal murashax oo golaha deegaanka u tartama. “Si deg-deg ah ayaanu xafiisyo badan u furnay dhamaan dalka oo dhan, waxaan filayaa inay saddex todobaad inuu ku akaa waqtiga kama danbaysta ahi markii la noo sheegay waqtiga doorashadda bisha 8-aad ee Augut dhowr iyo labaatankeedii ayay ahayd, Septembar 10-keedii meelahaas ayayna ahayd waqtiga la iska doonayay in la soo buuxiyo wadanka oo dhan murashaxiintoodii. Aad ayay u adkayd, waxay noqotay islamarkiiba in aanu dalka oo dhan isku maro, tuulo kasta waan soo maray. Jaaniskayaga ayaanu qaadanay, waana la tartamayay. Ilaahayna waa nagu guuleeyay.”
Waxaa uu ka hadlay oo kale erayga New UCID oo hal-hays u ahaa doorashadaas, waxaana uu yidhi. “Madaxweynihii hore ee Maraykanka Bill Clinton ayaa u yimi xisbiga Dimuquraadiga ah oo kala daad-san, waxana uu u bixiyay (New Democratic Party), sadex jeer ayaanu xisbigii ku soo baxay, sidoo kale, waxaa isticmaalay Eraygii New raysal wasaarihii hore ee Ingiriiska Tony Blair. Markaa, New-da xisbiyo ku faa’iiday baanu soo aragnayoo anana waanu adeegsanay, waananu ku faa’iidnay oo soo bax Xisbigii.”
Doorashaddii deegaanka ee ugu danbaysay aad ayuu u dhaliilay Jamaal waxaana uu tilmaamay in aanay ahayn mid u dhacday si cadaalad ah. “Doorashadu mid adag ayay ahayd aad u adag, anaga UCID ahaan dagaal culus baa nagu dhacay oo xukuumadda ka imanayay, waxaana jirtay oo la iibsaday murashaxiin badan oo aanu lahayn oo ay ugu horeeyaan murashaxiintii gobolka Togdheer. Habeen qudha ayaa shan murashax lanaga saaray.”